Mhedzisiro yekuredza zvisiri pamutemo | Green Renewables
Europe yakatemera nyika nhatu dzisingakwanise kupedza hove zvisiri pamutemo
Europe inopedzisa kuita yavo zvinotyisa: yakapa matanho makukutu kumatunhu matatu asina kutevedzera kuzvipira kupedza hove zvisiri pamutemo: Belize, Cambodia y Gini. Nyika idzi nhatu hadzizokwanisa kuendesa hove kuEuropean Union, nepo ngarava dzeEuropean dzichange dzisina mvumo yekuredza mune dzadzo mvura nzvimbo.
Ino inguva yekutanga kubva mutemo we hove mumvura yakadzika muna 2008, kuti Europe inoita nenzira iyi, ichiita masanction anoshanda. Iyo misika munharaunda ndechimwe chezvakakosha kwazvo pasi, uye kutyisidzirwa kwe Brussels vakave nemhedzisiro yavo.
Izvi zvisarudzo ndezvakaitika kare, uye zvinoratidza kuti European Union muenzaniso mukurwisa hove zvisiri pamutemo. Vagari vekuEurope vanofanirwa kuziva kuti hove dzavanodya dzinoredzwa mune a inogona kuendererazvisinei nekwakabva.
Belize, Cambodia y Guinea hauna kushamisika: kumiswa kwayo kunopindura kune yakareba nzira ye yambiro neKomisheni. Kunze kweizvi, zvinoonekwa kuti nhaurirano haina kutyorwa, uye kuti iyo penalties inogona kusimudzwa kana Nyika idzi dzikabvuma kuedza kurwisa hove zvisiri pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Ecology » Kurima kwezvakatipoteredza » Europe yakatemera nyika nhatu dzisingakwanise kupedza hove zvisiri pamutemo
Curitiba, Brazil, ine nguva yakaoma kuzvimisikidza pachayo
Kusvibiswa kwemweya kunowedzera mukume mukume